Jeegaantu Waa Cuddur, Aan Cidi Dawayn Karin … Qabyaalada Oo Qaybo Yeelatay … Qalinkii: Ahmed Hariir Adam
Qabyaaladu waa Cudur aad ugu fidaya bulshada somaliland, waxaana aad arkaysaa in ay ku faafayso iyadoo si cad loo adeegsanayo oo laysugu faanayo.
‘JEEGAAN’ magacani waa mid ka mida magacyada ku cusub dhagahayga ee la dhashay waqtigii doorashada isagoo hal hays noqday, oo xitaa loo adeegsado bulsho dhan iyadoo lagu sifaynayo in ay dan wadda leeyihiin, taas oo sii hurisay xaaladii awalba cakirnayd ee la xidhiidhay qabyaalada, eexda iyo nin jeclaysi ku qotoma qabiil, taas oo ka fog danta dadka iyo dalkaba oo keenaysa dib u dhac aad u balaadhan iyo in aan ka leexano tubta nabada iyo barwaaqada waxaanan qabaa in siyaasada aan
loo isticmaalin sidii loogu talo galay ee lagu sii qurxiyey adeegsiga qabyaalada iyo qaraabo kiilka.
Waxa wax aad loogu xumaado ah in maanta dawladu yeelato magac Qabyaaladaysan ‘DAWLADII JEEGAANTA’ oo loo nisbeeyo qolo gaar ah oo ku doodayaan waxa ay u janjeedhaa garab oo ay u xaglisaa, waxa jirta……Tusaale "Waxa xidhan Xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee Daad-madheedh oo ay shacabku soo doorteen haystana xasaanadoodii oo loo xidhay shakhsi ganacsato ah oo ay ilaa hadda u xidhanyihiin, taas oo ah in ay dawladu amar ka qaadato shakhsiyaad qayb wayn ku lahaa guusha xisbul xaakimka, oo ay ku raali galinayso fulinta amaradooda iyadoo qaadaysa amar kasta oo ay soo faraan laamaha dawlada”.
Haddaba waxa khalada in layska aamino wax ku salaysan dhalanteed oo aan dhab ahaanshiyahooda cidna cadayn karin, taas oo keeni karta kor u sii qaadi karta heerka qabyaalada ee hadda jirta, keenaysana in dawladnimada meeqaamkeedu hoos u dhaco, waxana fiican in dawladu wax kasta oo ay kaga foogaan karto qabyaalada la timaado kasbatana quluubta shacabkeeda Muxaafid iyo Mucaaridba taas ayaana sii wadi karta dawlad wanaaga iyo qaranimada, inagana fogayn karta sunta halista ah ee ay qabyaaladu faraha ku sidato ee ah isku dirka, kala fogaanshaha, is aaminaad la,aanta iyo calool-xumada ay ummadu ka dhexlayso qabyaalada.
Jeegaantu haddaba waa magac mala awaal ah oo ku salaysan hab isireed Qabiil oo lays raacinayo bulsho isku fac dhow oo loo jeedo in ay isku mawqif yihiin. waxaana si khaldan u aaminsan bulsho aad u balaadhan una haysata in dawladu ay tahay JEEGAAN ee aanay ahayn dawlad dhex ka ah dhamaan shacabka ay maamusho, waxaana taas keentay qabyaalada oo heerkii u saraysay maraysa, gaadhayna xitaa in laysugu faanaayo qabiil.
QABYAADA MAXAA KEENAY HADDA:
Waxaynu taaganahay waqtigii aynu aasi lahayn qabyaalada ee aan qaadi lahayn tubta horumarka, cadaalada iyo dawlad wanaaga, balse waxaad moodaa in aan dib u jeesanay oo aan ku noqonay dariiq aan hore uga gudubnay waxyaabaha ka qayb qaatay qabyaalada in ay sii balaadhato waxa kamida qodobadan.
1. Doorashooyinkii Golaha Degaanka iyo tii Madaxtooyada oo aad u soo celiyey naxligii iyo xumaantii qabyaalada iyo reernimada, iyagoo ka gudbey xadkii qarannimada iyo dawladnimadaba.
2. Madax dhaqameedka oo ku milmay siyaasadii, iyagoo qayb laxaadle ka qaatey kor u qaadida heerka qabyaaladeed ee bulshada xoogana saaray arimo aan khusayn oo siyaasadaysan taas oo keentay in reernimo loo kala baxo, oo midba siyaasi shaadhka bishiisa sita durbaanka u tumaan.
3. Madaxda Axsaabta ama siyaasiyiinta dalka oo xooga saaray in beelnimo ay wax ku doonaan oo aanay Barmaamij waxqabad waxba ku doonin, taas oo iyana soo celisay heerka qabyaalada ee bulshada dhexdooda.
4. Faham la.aanta Dawladnimada iyo Waddaninimada oo ku yar inta badan bulshadeeda ayaa iyaduna qayb laxaad leh kaga jirta kor u kaca qabyaalada.
5. Is dhexgalka oo ku yar bulshadeena marka laga reebo Caasimada dalka ee Hargaysa gobolada dalka, midba reer baa sheegta dhamman lixda gobol taas oo keenaysa kala qoqob bulsheed.
Gebogebadii, waxaan u baahanay in aan fahano Qarranimadu iyo Waddaninimadu waxay tahay, si aan ugu dheganaano wadankeena kana fogaano Qabiil aan aakhiro waxba kuu tarayn.